အကောင်းဆုံး လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Firefox add-ons များစုစည်းမှု | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
အကောင်းဆုံး လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Firefox add-ons များစုစည်းမှု
Posted on October 30, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	ဒီနေ့ခေတ်မှာ အွန်လိုင်းသုံးသူတိုင်း ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လုံခြုံရေးအတွက် သတိထားရမဲ့အနေအထားမှာ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အောက်မှာ အကောင်းဆုံး လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Firefox addons (7)မျိုး ကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
StealtherStealther ကတော့ သင် ဝက်ဆိုက်တွေကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးတိုင်း သင့်ကို trace လိုက်လို့မရအောင် ခြေရာလက်ရာတွေ ဖျောက်ပေးပါတယ်။ ဒီ addon ဟာ browsing history, cookies, cache, recent tabs, တွေကို disable လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီမှာနှိပ်ပြီးသွားယူပါ
Close ‘n’ ForgetClose ‘n’ Forget ကတော့သင် ဝက်ဆိုက်တခုကိုသွားကြည့်ပြီးရင် “special close button” လေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ အဲဒီဆိုက်နဲ့ပက်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကို သင့်ရဲ့ web history တွေ cookies တွေကနေဖျက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာနှိပ်ပြီးသွားယူပါ
WOT ဒီ addon လေးကတော့ ကိုယ်ကြည့်မဲ့ ဆိုက်တွေ လုံခြုံမှုရှိမရှိ အဆင့်အတန်းခွဲခြားသက်မှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာနှိပ်ပြီးသွားယူပါ NoScript
ဒီမှာနှိပ်ပြီးသွားယူပါ BetterPrivacyဒီ addon လေးကတော့ သင့် super cookie တွေကိုကာကွယ်စောင့်လျှောက်ပေးချင်းဖြင့် သင် tracking အလိုက်ခံရခြင်းမှကင်းဝေးအောင် ကာကွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒီမှာနှိပ်ပြီးသွားယူပါ Ghosteryဒီ addon လေးကတော့ သင်ကြည့်နေတဲ့ဆိုက်က သင့်ကို tracking လိုက်နေသလား မလိုက်ဘူးလားဆိုတာ ဖော်ပြ သတိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမှာနှိပ်ပြီးသွားယူပါ အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ… ကြော်ငြာကလစ်ခြင်းဖြင့်အားပေးကြပါ…ငိငိေိခိ http://www.mm-knowledge.com နည်းပညာမြို့တော်
This entry was posted in firefox add-on. Bookmark the permalink.
←2Guns	facebook မှာမိမိအကောင့် ကို ပြန် hack ကျမယ် (လော့ ကျသူများ ) အတွက် →